‘औषधि पसले’ मात्र होइनन् फर्मासिस्ट
भदौ २४, २०७४ शनिवार १३:५९:०० प्रकाशित
फार्मेसी क्षेत्रको हकहितका लागि २०२८ सालमा ‘नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन’ जन्मिँदा यहाँ औषधि ऐन, औषधि व्यवस्था विभाग केही पनि थिएन । नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन), नेपाल औषधि व्यवसायी संघ लगायतका संस्थाको पनि उपस्थिति थिएन । नेपालमा औषधि व्यवस्था विभाग, नेपाल फार्मेसी काउन्सिल निर्माणका लागि निकै ठूलो योगदान पुर्‍याउने एसोसिएसन भने क्रमशः ओझेल पर्दै गयो । फर्मासिस्टहरूको यो संस्थाले औषधि उत्पादनदेखि बिक्री–वितरणसम्म गुणस्तरीय काम गर्दै आएको थियो ।
पछिल्लो समय यो संस्थामा जति पनि अध्यक्ष भए, तिनीहरू कोही विदेशमा पिएचडी गर्न तथा अन्य अवसरको खोजीमा बाहिरिए । यसकारण संस्थाको क्रियाशीलता घट्दै गयो । तर अहिले नयाँ टिम आएको छ । ऊर्जाशील युवाहरूको यो टिमले लामो समयदेखि ओझेलमा परेको संस्थालाई फेरि उठाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
औषधि बेच्नेमात्र होइनन् फर्मासिस्ट
अधिकांशको बुझाइमा, फर्मासिस्ट भनेको औषधि पसल थापेर औषधि बेच्ने मानिस हो । वास्तवमा त्यो होइन । बिरामीले सेवन गरिरहेका औषधि उद्योगमा बनाउनेदेखि, गुणस्तर जाँच गर्ने, अध्यापन गर्ने लगायतका जनशक्ति यो क्षेत्रमा पर्छन् । फर्मेसीमा मुख्यतया कम्युनिटी फार्मेसी (टोल समुदायमा रहेका औषधि पसल), शिक्षण संस्था (एकेडेमिक), इन्डस्ट्रियलदेखि मार्केटिङ क्षेत्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
इन्डस्ट्रियल फर्मासिस्टहरू औद्योगिक क्षेत्रमा रहेर औषधि उत्पादनमा काम गर्छन् । एकेडेमिकतर्फ संलग्नहरू विभिन्न कलेजमा अध्यापन गर्छन् । विभिन्न नियामक निकायमा पनि फर्मासिस्टको जनशक्ति कार्यरत छ । फार्मेसीका यी सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासका साथै तालिमदेखि पेसागत हकअधिकारका सवालमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ ।
डाक्टर डोमिनेटेड सिस्टम
जनस्वास्थ्यको विषयमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका फर्मासिस्टलाई बेवास्ता गरिएको छ । हामीकहाँ ‘डाक्टर डोमिनेटेड हेल्थ केयर सिस्टम’ छ । यहाँ फर्मासिस्टलाई ‘औषधि पसले’को रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।
नेपालमा ५५ औषधि कम्पनी छन् । यी कम्पनीले ९ देखि १० हजार ब्रान्डका औषधि उत्पादन गर्छन् । आयुर्वेदिकमा ७०–८० कम्पनी छन् । यस हिसाबले नेपाल औषधिको क्षेत्रमा आधा जति आत्मनिर्भर छ ।
डाक्टरले आवश्यक औषधिका लागि सुझाव दिएपछि फर्मासिस्टहरूले ‘मलिक्युल’ ल्याएर अनुसन्धान गर्छन् । सोहीअनुसार उद्योगबाट औषधि तयार हुन्छ । तर, त्यसरी बनाउने औषधिमाथिको श्रेय फर्मासिस्टहरूलाई गएन । त्यसैले उनीहरूले बिस्तारै पलायनको बाटो समाए । मसँगै पढेका ९० प्रतिशत साथीहरू विदेशिएका छन् । नेपाली कम्पनीबाट उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक निकै न्यून थियो ।
कम्युनिटी फार्मेसी र हस्पिटल फार्मेसीमा पनि फर्मासिस्टको महत्त्व छ । कम्युनिटी फार्मेसी समुदाय लक्षित सेवा हो । अर्को छ, अस्पताल फार्मेसी । हरेक अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ । यस्ता फार्मेसीमा ‘क्लिनिकल फर्मासिस्ट’ हुनुपर्ने मान्यता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विकसित मुलुकमा डाक्टरहरूले रोगको पहिचान गरेपछि फर्मासिस्टलाई सिफारिस गर्ने र उसैले औषधिको नाम लेखिदिने चलन हुन्छ । नेपालमा भने सोझै डाक्टरहरूले नै औषधिको नाम सिफारिस गर्छन् । नेपालमा फर्मासिस्टलाई औषधि सिफारिस गर्ने अधिकार छैन ।
अस्पताल फार्मेसी खुल्नु राम्रो
प्रत्येक अस्पतालको आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्छ भनेर सरकारले चालेको कदम स्वागतयोग्य हो । यसले बिरामीलाई औषधि सस्तो पर्छ र दलालको चलखेल हुँदैन । अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका आए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को ब्याचलर तहको बी फार्ममा क्लिनिकल फर्मासिस्टमा केन्द्रित हुन खोजेको देखिन्छ । उहाँहरू बढीजसो क्लिनिकल क्षेत्रमै काम गर्दै आउनुभएको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भने कस्मेटोलोजी, इन्डस्ट्रियल फार्मेसी लगायतका विषय छान्न पाइन्छ । मास्टर्स तहमा पनि नयाँ कार्यक्रम आएका छन् । अस्पताल फार्मेसी निर्देशिकामा क्लिनिकल फर्मासिस्ट भन्नाले फार्मेसीमा मास्टर्स गरेको र त्यसपछि फार्म डी कोर्स गरेको भन्ने बुझिन्छ । नेपालमा बाहेक विभिन्न देशबाट पढेर आएकाले पनि काम पाएका छैनन् । उनीहरू मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिभ (एमआर) जस्तो मार्केटिङको क्षेत्रमा काम गर्न वाध्य छन् ।
फर्मासिस्ट विभिन्न विधामा खपत हुने जनशक्ति हो । औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा उनीहरूको भूमिका हुन्छ । औषधि बनाउने कच्चा पदार्थलाई नेपालमा ल्याएपछि कुन प्रकारको औषधि बनाउने भनेर निधो गरिन्छ । औषधि व्यवस्था विभागले हरेक कम्पनीमा रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट विभाग हुनुपर्छ भनेर अनिवार्य गरेको छ । साथै, म्याद नाघ्ने मिति बारे पनि फर्मासिस्टले नै टुंग्याउनुपर्छ ।
हरेक स्पेसिफिकेसन अनुसार औषधिको डिजाइन गर्ने काम फर्मासिस्टको हो । डाक्टरको सिफारिस अनुसारको औषधिको नयाँ डोज र डिजाइन पनि फर्मासिस्टले नै गर्नुपर्छ । औषधि उद्योगमा रिसर्चका साथै प्रोडक्सन, क्वालिटी कन्ट्रोल युनिट हुनुपर्छ । एउटा औषधिले अन्तिम रूप पाउनुअघि ५–६ पटक परीक्षण हुनुपर्छ । गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने अर्को युनिट समेत हुन्छ । यी सबैमा सिनियर फर्मासिस्ट संलग्न हुन्छन् ।
नेपालमा फर्मासिस्टले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् । हेल्थ असिस्टेन्टका लागि सरकारबाट वर्षेनि डेढदेखि दुई सयको दरबन्दी खुल्छ । तर, डिप्लोमा फार्मेसी गर्नेहरूका लागि दरबन्दी नै छैन । जिल्ला र अञ्चल अस्पतालमा समेत दरबन्दीको अभाव छ । दरबन्दी भएको ठाँउमा पनि फर्मासिस्ट गएका छैनन् । नेपालमा ३५ सयदेखि चार हजार फर्मासिस्ट कार्यरत छन् । एसिस्टेन्ट फर्मासिस्टतर्फ भने ६ हजारदेखि ६ हजार ५ सय जति होलान् । औषधि व्यवस्था विभाग र व्यवस्थापन महाशाखामा छिटफुट रूपमा ४–५ जनाको भ्याकेन्सी खुलाउने चलन छ । हरेक अस्पतालमा फर्मासिस्टको दरबन्दी आवश्यक छ । २५ बेडसम्म दुई जना डिप्लोमा फर्मासिस्टको दरबन्दी छ भने त्योभन्दा माथिल्लो तहमा पनि त्यही अनुसार व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले थप दरबन्दी खुलाउने हो भने दक्ष जनशक्ति बेरोजगार हुनुपर्ने थिएन । यसबाट सरकारी अस्पतालको सेवा र गुणस्तर बढ्ने थियो ।
(कट्टेल नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसनका प्रवक्ता हुन्)
१. परिवार र बाल स्वास्थ्य मर्ज, परिवार कल्याणको निर्देशकमा डा बिच्छा
२. डा केसीको समर्थनमा वसन्तपुरमा १०० भन्दा बढीको सामूहिक अनसन सुरु
३. स्वास्थ्य सेवा विभागको नयाँ संरचना : आपूर्ति, पुनर्जागरण, कुष्ठारोग, बाल र परिवार स्वास्थ्य महाशाखा खारेज
४. जसले पोलिथिनको पञ्जा बनाएर बाटामै सुत्केरी गराउँदै आमा र बच्चाको ज्यान जोगाए
५. प्रदेश ५ का स्वास्थ्य संस्थामा ५ सय १७ जनाको दरबन्दी रिक्त, ३ सय २२ वडा वडा हेल्थपोष्ट विहीन
६. स्वास्थ्यलाई व्यापारबाट मुक्त राख्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री यादव [भिडियो अन्तर्वार्ता]
७. डा केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलता आउने खतरा, परिणाममुखी वार्ताका लागि आग्रह
८. ह्याम्स हस्पिटलले गर्‍यो खेलाडीलाई सम्मान
९. डा केसीलाई भेट्न मोहन वैद्य पुगे शिक्षण अस्पताल
१०. लेखक खगेन्द्र संग्रौलाको प्रश्न : के सरकार डा केसीको मृत्युको प्रतिक्षामा छ?
१. डा केसीको समर्थनमा भोली माइतीघरमा प्राध्यापक, विश्लेषक, कलाकारसहित हजारौँले प्रदर्शन गर्दै
२. जुम्ला अस्पतालको घटना छानविन गरी दोषीलाई कारबाही नगरिए सामूहिक राजिनामा दिने डाक्टर, नर्स र कर्मचारीको चेतावनी
३. डा केसीलार्इ एक शुभचिन्तकको खुला पत्र: मित्ररूप धारण गरेर आक्रमण गर्नेबाट जोगिनुहोला
४. डा केसीलार्इ भेट्न करिश्मा मानन्धर टिचिङ अस्पतालमा
५. का‌ंग्रेस सभापति देउवाले भेटे डा केसीलार्इ, वार्ता गरी जीवन रक्षा गर्न सरकारसँग माग